अनिच्छित गर्भ रहेमा के गर्ने ! औषधिबाट गरिने गर्भपतन कति सुरक्षित ? – ramechhapkhabar.com
अनिच्छित गर्भ रहेमा के गर्ने ! औषधिबाट गरिने गर्भपतन कति सुरक्षित ?
सन्तानको रहर पुगिसकेपछि पनि गर्भ रहन सक्छ । बेलाबखत अप्रत्यासित गर्भ रहन्छ । यसरी अनिच्छित गर्भ रहेमा के गर्ने ? यसमा एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ, गर्भपतन गर्ने ।
निश्चित अवधीका गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । गर्भपतनका लागि केही विधि प्रचलित छन् । अहिले औषधि सेवनबाट समेत गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर, यसमा केही सर्तकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मेडिकल एर्बोसन (औषधिद्धारा गरिने गर्भपतन) ६३ दिन सम्मको गर्भपतनका लागि प्रभावकारी र सफल रहे पनि यस्का आफ्नै असरहरु छ । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउला जस्तो हुने, पखाला लाग्ने, वाक्वाक हुने तथा महिनावारीको जस्तो वा केहि रगत बग्ने हुन सक्छ । यस्तो असरहरु समान्यता आफै हराएर जान्छ र स्वास्थ्य परार्मशको आवश्यक्ता नपर्न सक्छ ।
तर, अत्याधिक रक्तश्राव भएमा, बेहोस भएमा, गन्हाउने वा योनिमार्गबाट पिप जस्तो जान थालेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको अर्थात तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकद्धारा गरिएका मेडिकल एर्बोसनमा यस्ता गम्भिर असरहरु प्रायः देखिदैन ।
औषधि पसलेहरु तथा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरु बाहेकले यस्ता औषधिहरु बिक्री वितरण गर्न नपाउने सामान्य नियम छ । तर केहि औषधि पसले तथा अनाधिकृत वा अयोग्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले क्षणिक आर्थिक मुनाफाका लागि भारतिय बजारबाट ल्याएका कमसल वा औषधिहरु बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाईन्छ ।
औषधिहरुद्वारा गरिने गर्भपतनको सफलताको सबभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो, गर्भको अवधि वा आकारको सहि मापन् । मेडिकल एर्बोसनका लागि पाठेघरको आकार पत्ता लगाउन भिडियो एक्स रे (अल्ट्रासाउण्ड) गर्नु पर्ने मान्यता रहेको छ । मेडिकल एर्बोसनका लागि अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो, गर्भपतन पुर्णरुपले भयो वा भएन, परिक्षण गर्नु ।